यसकारण राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्छ स्ववियु::Leading Nepal News
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको उत्कर्ष दमन हुदा २०३६ सालमा भएको तुमुलकारी विद्यार्थी आन्दोलनले स्ववियुको स्थापना गरेको थियो । पार्टीहरु प्रतिबन्धित भएको वेला विद्यार्थीविच राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न केही सहजता प्राप्त भएको थियो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्था नभएको बेला स्ववियुको आवधिक निर्वाचन हुने विषय निःसन्देह महत्वपूर्ण विषय थियो । स्ववियुको वैधानिकताको सदुपयोग गरेर तत्कालीन प्रतिबन्धित नेका र वाम पार्टीहरुले तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको ज्वारभाटामात्र सिर्जना गरेनन्, आफ्नो पार्टीलाई राष्टव्यापी विस्तारको लागि स्ववियुलाई एक सशक्त सम्पर्क सूत्रको रुपमा प्रयोग गर्न सफल भए । तर आज परिस्थिति विल्कुल भिन्न भएको छ । अब स्ववियुको पुरानो संरचनाको औचित्य सम्पूर्ण रुपमा समाप्त भएको छ । यसलाई केही बुँदाहरुमा यसरी सूत्रबद्ध गर्न सकिन्छ ।
क) शैक्षिक संस्थाभित्र राजनीति
लामो संघर्ष पछि नेपाली जनताले सम्पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गरिसकेका छन् । अब हरेक क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाइन्छ । सो प्रयोजनको निम्ति अब विश्वद्यिालय वा क्याम्पस गईरहनु पर्दैन । फेरि ती संस्था राजनीति गर्ने अखडा होईनन् । ती अध्ययन अध्यापनका केन्द्र हुन् । विगतको वाध्यताको निरन्तरता अब किमार्थ आवश्यक छैन । बाबु आमाको खर्चमा अध्ययन गर्न आएको कल्कलाउदो उमेरका विद्यार्थीलाई राजनीतिमा होमेर राजनीतिक पार्टीले अब राजनीतिको रोटी सेकिरहनु पर्दैन । शैक्षिक संस्थाभित्र हुने राजनीतिक क्रियाकलापले समग्र देशको शैक्षिक स्तर विग्रेको र यसले देशको आर्थिक समृद्धिमा दीर्घकालसम्म असर पार्नेछ । स्ववियु पुरानो संरचना खारेज गरी नयाँ गैर राजनीतिक चरित्रको बनाइएमात्र शान्त शैक्षिक वातावरण बन्ने निस्चित छ । स्ववियु निर्वाचनमा विद्यार्थी अघि सारेर राजनीतिक पार्टीहरु चुनाव लड्ने भएकोले त्यहाँ हिंसा भड्किने खतरा त्यत्तिकै छ । करोडौंको खर्च गरेर लडिने स्ववियु चुनावको अब कुनै तुक छैन ।
ख) स्ववियुमा हुने भ्रष्टाचार
स्ववियुमा जित्ने नेताहरुको ध्यान विद्यार्थीको हक हित भन्दा पनि क्याम्पसका भौतिक संरचना निर्माणको ठेक्का पट्टातिर सोझिन्छ । त्यहाँ ठूल्ठूला कमिसन र भ्रष्टाचारका खेल चल्दछन् । त्यही कारण हो, स्ववियु सभापतिको टिकट पाउन मातृ पार्टी वा विद्यार्थी संगठनमा सभासदको टिकट पाउनेभन्दा ठूलो लडाँई हुने गरेको देखिन्छ । अहिले कै अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने स्ववियु कुनै विद्यार्थी हक हित गर्ने केन्द्र होइन, युवा राजीतिककर्मीलाई भ्रष्टाचार र कमिसनखोरको तालिम गर्ने अखडा बन्ने निस्चित छ । विद्यार्थीलाई सुशासन र सदाचार सिकाउनु पर्नेमा भ्रष्टाचारी र कमिसनखोर बन्न सिकाएपछि कालान्तरमा उनै प्रधानमन्त्री,मन्त्री हुँदा कस्तो शासनको अपेक्षा गर्ने ?
ग) राजनीतिका लागि विद्यार्थी बन्ने चलन
स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नको लागि अध्ययन पूरा गरेका ( वा जेन तेन प्लस टु पास गरेर अध्ययन छोडेकाहरु समेत ) पटक पटक क्याम्पस भर्ना भइरहन्छन् । ती नक्कली विदयार्थीको प्रमुख धेय क्याम्पसभित्र राजनीति गर्ने हुन्छ, पढ्ने होइन । जसको उदेश्य पढ्ने हुदैन, उसको हातमा एक शैक्षिक संस्थाको बागडोर गएपछि त्यस संस्थाको शैक्षिक स्तर खस्कनु नितान्त स्वभाविक छ । क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी,लेखा कक्षमा तालाबन्दी, हडताल, घेराउजस्ता कार्य शैक्षिक संस्थाका दैनिकी बन्दछन् । अध्ययन, अनुसन्धान, परियोजना कार्य, प्राज्ञिक बहस ओझेलमा पर्दछन् । शैक्षिकस्थल दिमागी अभ्यासको थलो हो , यो बाहुबलीय अभ्यासको थलो होइन । तर डनहरु, टेण्डर पार्ने समुह, नेताका खास मान्छे मिलेर बाहुबलीय अभ्यास गर्ने अखडाको रुपमा आंगिक क्याम्पस विकसित हुदै जानु ज्यादै चिन्ताको विषय हो ।
घ) के हुन सक्छ यसको समाधान ?
स्ववियु म्याद नाघेको औषधी भएको छ । यसको जति बढी इस्तेमाल गर्यो त्यति हानी हुनेवाला छ । त्यसकारण सर्वप्रथम स्ववियुको विद्यमान संरचना खारेज गर्नु पर्दछ । कलेज परिसर भित्र कुनै पनि विद्यार्थी संगठनको झण्डा, लोगो तुल ब्यानर राख्न दिइनु हुदैन । शैक्षिक उन्नयनका लागि विद्यार्थीको सहभागिता बढाउन कलेज व्यवस्थापन समितिमा संकायबाट सबभन्दा राम्रो शैक्षिक र प्राज्ञिक क्षमता प्रदर्शन गर्नेहरुको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । कक्षा वा संकायको मेधावी विद्यार्थीको सहभागिता रहने विद्यार्थी काउन्सील बनाउन सकिन्छ । कलेज परिसरमा विद्यार्थी, शिक्षक र परिचय पत्रको आधारमा अभिभावकभन्दा अरुलाई प्रवेश निःषेध गरिनु पर्दछ । यसो गर्न सके थुप्रै सकारात्नक परिणाम हात लाग्दछन् । विश्वविद्यालय र यसका आंगिक कलेजमा केवल अध्ययन, खोज अनुसन्धान र प्राज्ञिक उन्नयनका काममात्र हुनेछन् । पार्टीका भीमकाय विद्यार्थी भातृ संगठनको औचित्य समाप्त हुनेछ । कलेजमा अध्ययन गर राजनीति गर्न चाहनेले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउ भन्ने मान्यतामात्र स्थापित